Warshadda Shumaca Beeswax | Soosaarayaasha Shiinaha iyo Shirkadaha Shumaca Shiinaha Beeswax
Shayga: Beeswax Pillar Candle cabbirka: 5x10cm, 5 × 12.5cm, 5x15cm, 7.5x10cm, 7.5 × 12.5cm, 7.5x15cm, Maadooyin: Beeswax Feature: Saaxiibtinimo ku-habboon, Dareewalnimo, Smokeless, Gubasho Nadiif ah Isticmaal Dhacdooyinka gudaha, Qolka, Jikada, Baarka, Arooska, Qurxinta
Shayga: Qalabka gacanta lagu duudduubay ee gunta beeswax Tales andles Cabbirka: 2x20cm ama Alaabooyin loo diyaarshay: Baakadaha Beeswax: Faa'iidooyinka loo diyaarshay isticmaalka shumacyada beeswax 1. Deegaanka u fiican oo aamin ah, aan sun lahayn. Aad ugu nadiifi qiiq yar markii si sax ah loo jaro maadaama aysan saliid ku salaysnayn. Shumacyada beeswax 100% waa dabiici, lagamama sameeyo wax kiimiko ah oo kimikal ah. 2. Urta weyni maadama ay si dabiici ahaan u uriyeen malabka iyo neecayaasha ubaxa ee malabku; kaarboon-dhexdhexaad ah. 3. Hayso po dhalaal sare ...
Shayga: Shumacyada shaashadda Beeswax Cabbirka: 14gram Waqtiga gubashada:> 4 saacadood Agab: 100% beeswax Xirmooyin: 8pcs / sanduuq. La habeeyay Shumacyadan shaashadda ah ayaa gacanta lagu shubay, waxay isticmaalaan 100% beeswax dabiici ah, waa shumacyada ugu cimri dheer uguna waari, waxay gubaan dhalaal, ka dheer, kana nadiif badan kuwa shumaca kale. Shumaca beeswax-gu waa sun la'aan, dhibic la'aan, iyo ufiican xasaasiyadaha. Shumaca beeswax waa xulashada ugufiican ee loogu talagalay kuwa annaga oo raba guri gubasho nadiif ah.
Shayga: Shumaca halbeega Beeswax Cabbirka: D5xH10cm Waxyaabaha: 100% shumaca Beeswax shamaca dabiiciga ah waa shumaca ugu cimri dheer uguna dheer, way gubanayaan dhalaal, ka dheer, kana nadiifsan nooc kasta oo shumacyo kale ah. Shumaca beeswax-gu waa sun, aan dhib lahayn, oo aan u fiicnayn xasaasiyadaha. Shumaca beeswax waa doorashada ugu fiican ee kuweena doonaya gurigeenna gubasho nadiif ah.
shumac shukulaato, shumaca tiirka beeswax, shumaca codka, Shumacyada codka codka beeswax, shumaca beeswax, shumaca beeswax,